March 2021 – " कञ्चनजंगा News "
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन, १९ गते बिहिबार, भोलि तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
No Comments on पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन, १९ गते बिहिबार, भोलि तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
भोलि श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल चैत्र १९ गते बिहिबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल १ तारीख चैत्र कृष्णपक्ष चतुर्थि तिथी विशाखा नक्षत्र वज्र योग वालव करण चन्द्रमा तुला राशिमा प्रातः ६ः३० बजे सम्म पश्चात बृश्चिक राशिमा आनन्दादि योगमा प्रवद्र्ध योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु विश्व मुर्ख दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
No Comments on म कलाकार भए भनेर बुवाको गु,नासो थियो मृ,त्यु हुने दिन म सँग नबोली जानु भयो मैले कैले खुशी दिनै सकिन (भिडियो सहित)
ॐ: लेखि पढेर सेयर गर्नुहोस् मनोकामना पुरा हुनेछ !
No Comments on ॐ: लेखि पढेर सेयर गर्नुहोस् मनोकामना पुरा हुनेछ !
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।
आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिंगको अर्थ नपुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।आखिर के हो त शिवलिंग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिंग भनिएको हो । स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिंग हो भनिएको छ । शिवलिंग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिंग हो । शिवलिंगको अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिवलिंगको अर्थ लिंग वा योनी होइन ।वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् ।हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग—अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।
त्यसैले शिवलिंगको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो । धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो । त्यसैले अनन्त शुन्यबाट पैदा हुन्छ, त्यसैमा लय हुनाका कारण यसलाई लिंग तथा अन्य विभिन्न नामबाट समेत सम्बोधन गरिएको हो ।जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिंग, अग्नी स्तम्भ/लिंग, उर्जा स्तम्भ/लिंग आदि । ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो ।यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिवलिंगका रुपमा चिनिन्छ ।ब्रह्माण्डमा उपस्थित सबै ठोस तथा उर्जा शिवलिंगमा निहित हुन्छ । वास्तवममा शिवलिंग हाम्रो ब्रह्माण्डको आकृति हो । किन शिब लिंग काे पूजा गरीन्छ ? शिव शंभु आदि र अंत का देवता हुन वहाकाे न कुनै स्वरूप हुन्छ न आकार वहा निराकार हुनुहुन्छ ।
यो कथा पढ्नुहोस , होस् उड्ने छ : पानीभित्रबाट सहतमा निस्केसरी छालामा बिस्तारै तीनवटा फरक-फरक रंगका सुईहरु प्रस्ट देखिन थाले। रातो रंगको धर्सो १२ अंकतिरको थोप्लो तिर सोझियो। निलो र हरियो रंगको सुई ६ बजेको थोप्लो तिर तेस्रियो। सुईहरु देखिएको ठाउँ छाम्दा पनि महसुस हुन्थ्यो।बाथरुमबाट निस्किए। सोच्दै नसोचेको क भयो, कसलाई भन्ने मन डरायो। ‘के भएको देखाउन हस्पिटल जाउँ कि? फेरी दुखेको पोलेको केही छैन। के होला पहिले पत्ता लगाउनु पर्ने सोचे। सोच्दा सोच्दै कोठा बाहिर निस्के। नजिकै रहेको सानिमाको घर तिर तेर्सिए। सानिमाको छोरा मैरै उमेरको थियो। उसैले भन्ने आँटेर कल गरे। ‘आयुष कता छस्?’ ‘घरमा’ ‘म आउँदै छु है’ ‘ओके’, उसले फोन राख्यो।
हातको अनौठो घडी हेरे। घडीमा देखिएको दुईवटा दाँयाँबाँया रहेका दमजस्ता मध्ये एउटा अलिक बाहिर र अर्को केही भित्र छिरेको जस्तो थियो। बाहुला सारेर त्यसलाई छोपी बानेश्वर तिर लम्के। बानेश्वर चोकमा बाटो काट्नेको भित्र सदा झै बाक्लो थियो। कलेज जान लागेका केटीहरु चर्को स्वरमा गफ गर्दै थिए। चोकको बिचमा ट्राफिकको सिठ्ठिको आवाज झनै चर्को थियो। धुवाँ, धुलो, कोलाहाल, यो भन्दा त गाउँकै वातावरण ठिक। गाउँसंग तुलना गर्दै मान्छेको भिड भित्र बाटो काट्न उभिरहेको थिए। बाहुला सारेर घडी हेरे। त्यो बाहिर निस्किएको जस्तो दम थिचेझै औलाले धकेलेको मात्र के थिए, त्यो त साच्चै थिचियो, भित्र पस्यो। यो भित्र पस्नासाथ पहिले दबिएझै रहेको अर्को तिरको दम फुत्त बाहिर आयो।
No Comments on फेरी अर्की बेहुली भाइरल, विदाई पछि मुस्कुराउँदै जव वेहुली नै कार चलाएर वेहुलाको घर हिडिन् (भिडियो हेर्नुस्)
दाङमा एउटा अनौठो घ’ट’ना ,मध्यरातमा यस्तो अवस्थामा पुगे अस्पताल (भिडियो हेर्नुस्)
No Comments on दाङमा एउटा अनौठो घ’ट’ना ,मध्यरातमा यस्तो अवस्थामा पुगे अस्पताल (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । दाङमा एउटा अनौठो घ/-/ट-//ना भएको छ । एक जना २७ वर्षका युवकको सम्पर्क राख्दै गर्दा गो//–प्य अंङ भाँ’–/चि’–ए//-पछि सफल श//ल्य//कृया गरिएको छ । मध्यरातमा श्रीमतीसंग सम्पर्क राखेका पुरुषलाई यस्तो घ//ट//ना भएको हो । ति युवकको दाङको तुलसीपुर सिटि हस्पिटलमा सफल श//ल्यकृ//या गरिएको छ । राति करिब ३ वजे तिर अस्पताल आएका उनको श//ल्य//कृया गरिएको हो । अहिले उनको सफल स//ल्य//कृ//या पछि स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् ।
डाक्टरको श///ल्य//कृया गरेका चिकित्सकले यस्तो घ//ट//ना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि खुलाएका छन् । अस्वभावीक आसनमा सम्बन्ध गर्दा यस्तो समस्या आउने चिकित्कसकले जनाएका छन् । यस्तो घ//ट//ना निकै विरलै हुने गरेको र तत्काल उपचार भए निको हुने बताएका छन् । तत्काल उपचार नगरे त्यसले अं//ग//मा स//म//स्या आउने पनि चिकित्सकले सुझाएका छन् । त्यस्तो कुनै समस्या आए ला जका कारण चिकित्सकसंग सल्लाह नगरे अन्य समस्या आउने बताएका छन् ।
नेपालमा यस्ता घटना निकै बिरलै भएको चिकित्सकले बताएका छन् । अस्पतालमा निकै सम्बेदनशिल अवस्थामा श//ल्य//कृ//या गरिएको र त्यो सफल भएको बताएका छन् । तत्काल श///ल्य//कृ//या नगरिए त्यसले अन्य पि//सा//व नलिमा पनि अ//सर गर्न सक्ने भएकाले तत्काल अस्पताल पुग्नुपर्ने बताएका छन् । चिकित्कसले सम्बन्धको पोजिशनमा सा//व//धा//नी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै अन्य कुनै औषधी खाएर पनि सम्बन्ध राख्दा समस्या आउनसक्ने पनि चिकित्सकको भनाई छ । चिकित्कसले श//ल्य//कृ//या गरिसकेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुने र जिवन पहिलाकै जस्तो अवस्थामा आउने बताएका छन् । श//ल्य//कृया पछि कम्तिमा ३ र ६ महिना स//म्ब//न्ध न//राख्न चिकित्कसले सुझाव दिने गरेका छन् ।
No Comments on चियावालीका नाममा चर्चित श्रृष्टिलाई अलपत्र पार्ने उनका श्रीमानका बारेमा खुल्यो अर्को ठूलो रहस्य, यसकारण लुकेका रहेछन् उनी (भिडियो हेर्नुस्)
No Comments on म आमा बन्नको लागि विवाह गर्दिन तर केटाहरुलाई भाडामा लिन्छु : सावित्री सुवेदी…
काठमाडौं । समयसमयमा चर्चामा आइरहने महिला अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी चर्चामा। यो भन्दा पहिले पनि विभिन्न ब’यानका कारण चर्चामा आएकी उनी त्यसरी नै भाइरल। उनले एक अन्तर वार्तामा आफु बाबु विनाको आमा बन्न चाहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
आफु अहिले तीस वर्षको भएको भन्दै अबको पाँच वर्ष पछि कुनै पुरुषसँ गयौ न स’म्पर्क गरेर बच्चा जन्माउने योजना रहेको बताएकी हुन् । उनले पुरुषलाई भाडामा लिएर आमा बन्न लागेको विषय अहिले चर्चामा आएको छ ।
विशेष गरेर पश्चिमा देशहरुमा चर्चामा रहेको सिं’गल मदर नेपालमा पनि आफुले सुरु गर्न लागेको जनाएकी छिन् । यसमा कुनै पनि महिलाले आफुले चाहेको पुरुषसँग केही रकम दिएरयौ ,न सम्पर्क राख्ने गर्छन तर त्यो युवक त्यो बच्चाको बुवा भने हुँदैन । अहिले महिलाहरुले पनि पुरुषका लागि सन्तान जन्माउने गरेका घ’टनाहरु समयसमयमा चर्चामा आउँने गर्दछन् ।
यो पनि -भाइरल चियावालिलाई अलपत्र पार्ने श्रिमान यिनै हुन ,ठग रहेछन् ,यस्तो सम्म गरेका रहेछन् (भिडियो हेर्नुस्)
साथै नुवाकोट जहाँ चियावालिको घर छ त्यहा संचारकर्मि पुग्दै गर्दा परिवार निकै गरिब भएको हामिले देख्न सक्यौ ।त्यतिमात्रै हैन चियावालिको आमा भन्नुहुन्छ कि नातिनि चेपेर छोरिले चिया बेचेर गुजारा गर्दै रहिछे किन नगरोस् पनि आखिर गरेर खानु त छदै छ ।बाल्यकालमा तिनै चियावालिलाई हुर्काउदै गर्दा बहुतै दुख भएको जिकिर गर्दै आमा एकदमै भावुक समेत भइन् ।
अहिले तिनै चियावालिलाई अलपत्रमा छाडेर गायब भएका श्रिमानको खोजि गर्दै गर्दा उनी ठग भएको खुलेको छ ।इराक पठाइदिन्छु भन्दै धेरै नेपालिको पैसा झ्वाम पार्दै हिड्दै गर्दा रहेछन् ।
No Comments on साथी भन्दै चिनाएकी युवती नै सौता बनेपछी….. (भिडियो)
No Comments on भाइरल चियावाली को घर पहिलो पटक पुग्दा, भिडियोमा श्रृष्टिको संघर्ष देखेपछि श्रीमानको बारेमा यस्तो भन्छन् परिवार (भिडियो हेर्नुस्)
No Comments on प्रहरीलाई १०० मा आएको दिदीको त्यो फोनले झस्कियो, तुरुन्तै दिदि भएको ठाउँमा पुग्दा त आफ्नै भाइले……